November 9, 2020 - Babal Khabar
Nov92020 by बबाल खबरNo Comments
Breaking News: तिहारको मुखैमा मन्त्रालयले भर्खरै जारि गर्यो यस्तो सुचना, भोलिबाट ७७ जिल्लामा यस्तो हुने !
मन्त्रालयले भर्खरै जारि गर्यो यस्तो सुचना, भोलिबाट ७७ जिल्लामा यस्तो हुने ! सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण ५०० भन्दा बढी भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा र २०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्लामा बन्दाबन्दी गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणलाई रोक्नका लागि ५०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा र २०० भन्दा बढी सङ्क्रमण भएका जिल्लामा बन्दाबन्दी गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्ला १२ वटा रहेका छन्। मोरङ, सुनसरी, बारा, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर र रुपन्दही रहेका छन् । यो पनि, नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको उत्तम साइत बिहान ११:३७ बजे दिएको बजे दिएको छ। *** यो
कुनै महिलाको मन जित्न चाहनु हुन्छ भने यो कुरा अवश्य जान्नुहोस, पुरुषले आफुलाई यसरी हेरोस भन्ने चाहन्छन् महिला !!
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ ।त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन ।विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको पछाडिको भाग (कम्मरभन्दा मुनि) लाई धेरैले नजर लगाउने गरेको पाइन्छ ।महिलाहरूले पनि आफूलाई सुन्दर देखाउन ती भागहरूलाई जोडतोडले मिहेनत गरेर सुन्दर राख्छन् । पुरुषहरूका नजर पनि त्यतै जाने गरेका हुन्छन् ।हाम्रो नेपाली समाज होस् वा पश्चिमा या भारतीयहरू नै किन नहुन महिलाहरू आफ्नो छातीलाई आकर्षक देखाउन ज्यान छाडेको प्रष्टै देख्न पाइन्छ छाती मात्रै होइन कम्मर र पछाडिको भाग पनि महिलाहरूले सकेसम्म पुरुषले हेरिदेओस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको समचारमा उल्लेख छ ! *** यो समाचार पुरा हेर्
Breaking- काठमाडौंमा सङ्क्रमण अत्यन्तै बढेसँगै लागु भयो यस्तो नियम, आफ्नै सबारी साधन चलाउने सबैले एकपटक अवश्य पढ्नुहोला !!
सरकारले कोभिड–१९को सङ्क्रमण पत्ता लगाउन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई व्यापक बनाउने भएको छ । स्थानीय तहलाई जागरुक गराई अबको एक हप्ताभित्रमा ट्रेसिङ कार्यलाई व्यापक बनाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ तथा कोभिड–१९ फोकल पसर्न महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले उपत्यकाका प्रत्येक वडामा कन्ट्याक्ट टे«सिङ समूह गठन गरेर टे«सिङलाई व्यापक बनाउने जानकारी दिनुभयो । अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा १५ वटा कन्ट्याक्ट टे«ेसिङ समूह रहेका छन । देशभरका स्थानीय तहमा एक हजार ७५ समूहले टे«सिङ गरिहेका थिए । ४६० गाउँपालिकामा ४६०, २७६ नगरपालिकामा ५५२, ११ उपमहारपालिकामा ३३ र ६ महागरपालिकामा ३० टोली परिचालन गरिएका छन् । उहाँका अनुसार सरकारले पहिले काठमाडाँै उपत्यकामा टे«सिङलाई केन्द्रीत गर्ने र त्यसपछि उपत्यका बाहिर गर्ने छ । त्यसै समूहले सङ्क्रमितको ट्राभल हिस्ट्रिको आधारमा नजिकका आफन्त
उदयपुरमा स्कुटर दुर्घटना हुदा कक्षा ११ को परीक्षा दिन हिडेकी एक युवतीको ज्यान गएको छ । जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका १० स्थित मदन भण्डारी आँखा अस्पताल नजिक सोमबार विहान करिव ७ः०० बजे भएको स्कुटर दुर्घटना १९ वर्षीया प्रिया बुढाथोकी र उनको भाई घाईते भएका थिए । घाइते अवस्थामा रहेका दुवैलाई तत्काल उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल उदयपुर पु¥याइएको थियो । जिल्ला अस्पतालमा उपचार नहुने भएपछि बिराटनगर पु¥याएर उपचार हुदैगर्दा उनले ज्यान गुमाएकी हुन् । प्रियाको १३ वर्षीय भाई युनिकको अवस्था भने सामान्य रहेको बताइएको छ । प्रियाको परीक्षाका लागि राजाबासबाट गाईघाट को ४९ प ९०७० नम्बरको स्कुटर चढेर दिदीभाई सँगै आउदै गर्दा सडकमा कुकूर जोगाउँन खोज्दा दुर्घटना भएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीलाई उधृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ । मृतक प्रिया उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटस्थित प्याराडाइज बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा ११ को परीक्षा विद्यार्
सावधान: के तपाईंको मोबाइलबाट थाहै नपाइ ब्यालेन्स सकिन्छ ? इन्टरनेट चलाउने सबैले अवश्य पढ्नुहोला !!
के तपाईंको एनसेल र एनटीसी सिमको ब्यालेन्स थाहै नपाईकन घटिरहेको छ? धेरैजसो मोबाइल प्रयोगकर्ताको एउटै गुनासो हुने गर्छ– पैसा त्यत्तिकै सकिन्छ। उमेर ढल्केकाहरू बच्चाले ट्रान्सफर गरेको सोच्छन् भने अधिकांशले ख्यालै गर्दैनन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एनसेलले जानकारी नदिईकन नै दैनिक १५ रुपैयाँभन्दा बढी ब्यालेन्स काटिरहेको पोस्ट भाइरल भएपछि धेरैले यो कुरा याद गरे। एनसेलले हुवावे गेम कन्टेन्ट र बिजनेस ह्यान्डलिङ शुल्कको नाममा दैनिक १५ रुपैयाँ ३२ पैसासम्म ब्यालेन्स काट्छ। यसैगरी, नेपाल टेलिकमको मोबाइल डेटामा ब्यालेन्सबाट पटक–पटक नौ पैसा काटिएको स्क्रिन सट सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ। ग्राहकले नै अनलाइन विज्ञापन क्लिक गर्दा यो अटोमेटिक रूपमा एक्टिभ हुने गर्छ । फेसबुक, एन्ड्रोइड ह्यान्डसेटको गुगल पेजमा डिजिटल विज्ञापन पेज क्लिक गरेपछि थर्ड पार्टीको सब्सक्रिप्सन पेज खुल्छ
आफ्नै श्रीमान् ले यस्तो अवस्था बनाइएकी पुजाले खालिन् सुन्नै नसकिने हृदय विदारक घटना, एस्ता अपराधी मानिसलाई के सजाए दिने ? (भिडियो हेर्नुस्)
धादिङमा श्रीमान् ले नै यस्तो अवस्था बनाएकी पुजा परियार अहिले मिडियामा आफ्नो कुरा राख्न सक्ने भएकी छन् । उनले टेलिफोनमा भनेका कुराहरु सुनेर एउटा श्रीमान्ले श्रीमतिलाई यतिसम्म पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैन । मलाई छोराको लागि बाँच्न दिनु भनेर बारम्बार बिलौना गरें तर मेरो कुराकानी कसैले सुनेन । उनले अस्पतालको शैयावाट भनेकी छन्, मलाई सासुले पनि यस्तै गर्नुभएको थियो । तर त्यतीबेला म बाँचे । त्यो दिन पनि सासु बचाएको भए मलाई यस्तो घटना हुने थिएन । श्रीमान् ले ढोका लगाएर ते ल त’ता’एर शरिरमा हा’ल्दा समेत सासुले बचाउन पनि नआएको पुजाले बताएकी छन् । श्रीमान् ले बारम्बार त्यस्तो गर्दा पनि सासुले कहिल्यै सहयोग नगरेको पुजाको भनाई छ । काठमाडौमा श्रीमान्ले एक महिना जागिर गर्दा पनि भिडियो कल गरेर आफ्नो अं ग देखाइदे भनेर दवाव समेत दिने गरेको पनि पुजाले बताएकी छन् । *** यो समाचार पुरा हेर
मानिसको बदला लिने तरिका अनेक हुन्छन् । कुनै बदला यस्तो हुन्छन् जसले अर्कोलाई होइन आफैलाई अप्ठेरो बनाउँछ । एक युवतीलाई त्यस्तै भएको छ । विवाह मानव जीवनको महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने नबुझेर त्यसलाई देखावटी बनाउँदा उनलाई समस्या भएको छ । सबै मानिसहरुले विवाहको पललाई अविस्मरणीय बनाउन चाहन्छन् तर यि युवतीले भने आफ्नो विवाहलाई विश्व चर्चित त बनाइन् तर त्यसको सकारात्मक सन्देश भने गएन । प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न नपाउँदै सम्बन्ध विग्रिएपछि आफ्ना प्रेमीलाई देखाउनकै लागि एक युवतीले कुकुरसंग विवाह गरिन् । यो घटना अर्जेन्टिनामा भएको हो । विवाहको दिन निश्चित गरिएपछि उनको प्रेमीसंग सम्बन्ध विग्रियो । उनको विवाहको एक दिन अगाडि उनको प्रेमीले उनीसंग विवाह नगर्ने निर्णय सुनाए । प्रेमीले दिएको त्यस्तो धो का को बदला उनले अनौठो तरिकाले दिने निर्णय गरिन् । प्रेमीसंग विवाह गर्न निश्चित गरिएकै साइतमा उनले कुकुरसं
धरानमा विवाह गरेको दुई महिनामै युवतीको निधन भएको घटनाको अनुसन्धानको क्रममा घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । श्रीमतिलाई अनुचित द’वा’व दिएर दे’ह त्या’ग गर्न बा’ध्य पारिएको घटनामा श्रीमान माथि मु द्दा परेपछि सिंगापुर प्रहरीले नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखामा जानकारी मागेको छ । श्रीमतिको नेपालमा निधन हुँदा पनि श्रीमान २२ वर्षीय आइतराज माबो नेपाल फर्किएका छैनन् । उनको श्रीमति सोनियाङ्मा लिम्बूको विवाह गरेको दुई महिनामै निधन भएको हो । सोनिको माइती पक्षले उनको ज्या न लि ए को आरोप लगाएका छन् । धरान उपमहानगरपालिका-११ बसोबास रहेका माबोको स्थायी घर झापा अर्जुनधारा नगरपालिका-४ हो। श्रीमती सोनियाङ्मा लिम्बूको दे”ह त्या’ग गर्न बाध्य पारेको मु द्दा मा अदालतले माबोविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। उनका श्रीमान्ले सिंगापुरमै बसेर म्यासेन्जर मार्फत सोनिका केटा साथीहरुसंग उनका बारेमा सोधखोज गर्ने र अनावश्यक स